Booqashadii Rooney Ee Aqalka Cad, Kulankii Carruurta Trump Iyo Qaabkii Uu Ku Tegay Madaxtooyada Maraykanka | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(12-12-2018) Kabtankii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England ee Wayne Rooney ayaa booqday aqalka cad ee dalka Maraykanka looga taliyo, halkaas oo uu deggan yahay madaxweyne Donald Trump iyo qoyskiisa.
Wayne Rooney ayaa bishii June ee sannadkan waxa uu soo afjaray waayihiisii ciyaareed ee waddanka Ingiriiska, kaddib markii uu Everton ku qaatay waqtigiisii ugu dambeeyey ugana sii dhaqaaqay dhinaca Maraykanka.
Rooney oo u ciyaara kooxda DC United, hase yeeshee waxa uu ku fashilmay inuu la qaado horyaalka MLS inkasta oo uu meel fiican soo gaadhsiiyey goolal badanna u dhaliyey.
33 Jirkan Ingiriiska ah ayaa martiqaad ka helay aqalka cad ee Maraykanka oo uu kaga qayb-galay xaflad loo dhigay xuska ciidda gaalada darteed, waxaanu halkaas kula kulmay qaar ka mid ah qoyska Donald Trump, waxaana warbaahinta lagu faafiyey muuqaalka sawir uu la galay Barron oo uu dhalay Donald Trump da’diisuna tahay 12 jir.
Booqashadiisa aqalka cad ee Maraykanka waxa Rooney ku wehelinayey xaaskiisa Coleen iyo afartiisa carruurta ah.